Costa Rica, Nasian’ny Horohorontany Nanana Tanjaka 7.6 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Septambra 2012 3:15 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Español, Magyar, Swahili, English
Nibitsika avy hatrany ilay horohorontanin'ny 5 Septambra 2012 tamin'ny 8 ora 42 mn nanana tanjaka 7.6 (Mercalli) namely ny fireneny ireo Costa Ricains. Ilay fihetsehana, nanana ny foibeny tany amin'ny faritra Guanacaste, dia re mafy tokoa tany akaikin'i Liberia sy tany San Jose ihany koa.
Nitatitra ihany koa ireo mpampiasa Twitter fa somary naharitra ilay horohorontany. Nampiasa ny tenifototra #temblorcr sy #terremotocr ny olona.
Araka ny bitsik'i Ariel Arburola (@arielarburola) [es] :
@arielarburola: Sady somary mihazakazaka ihany aho saingy mbola mahita fotoana kely hanoratana ihany #temblorcr
Miakatra tsikelikely ny tatitra vitsivitsy momba ny fahavoazana, hatrany anaty Twitter. Sergio Pacheco (@lafoto) [es] nandefa momba ireo fahavoazana nahazo ny tranon'ny anabaviny ao Montezuma, tena akaikin'ny foibeny:
@lafoto: Nitresaka ny gorodon'ny tranon'ny anabaviko ao Montezuma Guanacaste #temblorcr
Tapaka ny sasany tamin'ireo tambajotra finday, araka ny itateran'i Cristian Cambronero (@cambronero) [es] azy :
@cambronero: Tapaka ny Movistar, miasa amin'ny ampahany ny ICE [Sampandraharaha misahana ny herinaratra ao Costa Rica] #terremotocr
Fabián Calvo (@FabianCalvo) [es] namaly hoe :
@FabianCalvo: @cambronero Somary ny mifanohitra amin'izany no aty, mahazo Movistar aho ary afaka miantso an'i Claro sy ny antso an-taribin'ny ICE, saingy tsy azoko mihitsy kosa ny tambajotra Kolbi
Ny OVSICORI (Sampana mpandinika ny horohorontany any Costa Rica) dia nitatitra fa mety hiakatra iray metatra ny haavon'ny rano any amorontsiraky ny saikinosin'i Nicoya noho ilay horohorontany, araka ny itateran'i El Periódico ao Costa Rica (@elperiodicocr.com) [es] azy :
@elperiodicocr.com: Nampiakatra iray metatra raha kely indrindra ny tany amin'ny saikinosin'i Nicoya ilay horohorontany, hoy i Marino Protti, avy amin'ny OVSICORI.
Ny tatitra mivantana amin'ny onjam-peo dia re tamin'ny alàlan'ny ADNfm radio [es], izay nisian'ireo olona niantso nitatitra fahatapahan-jiro, tafo taila nirodana, ary faharavàna, na dia tsy nisy aza fitaterana famoizana aina hatreto
Nisy fanairana mibaiko tena nandeha ho an'ireo faritra any amin'ny Pasifika sy hatrany Shily, saingy ny Kaomisionam-Pirenena ho an'ny Vonjitaitra (CNE) no nanajanona azy io ho an'ireo any amin'ny morontsiraky Costa manamorona ny Pasifika.
Tao amin'ny Twitter sy tamin'ny alàlan'ny fampahalalam-baovao ho an'ny daholobe, toy ny ADN.fm, dia nangataka ireo olom-pirenena sy mpanao gazety ny mba hanaovan'ny olona tatitra ihany koa any anaty aterineto sy ireo tambajotra sosialy toy ny Twitter.
Ny filoham-pirenena, Laura Chinchilla (@Laura_Ch) [es], dia nandeha nanangom-baovao tany amin'ny Kaomisionam-Pirenena ho an'ny Vonjitaitra :
@Laura_Ch: Noho ny fahasahiranana eo amin'ny foto-drafitrasa fifandraisana dia mankany amin'ny CNE aho mba hahazo ireo vaovao mikasika ilay horohorontany izay namely ny firenena.
Ny Hopitaly Monseñor Sanabria ao Punta Arenas, Costa Rica, taorian'ilai horohorontanin'ny 5 Septmbra. Sary avy amin'ilay mpampiasa Twitpic, @tapachiche